China 250ml Yakakwira Mhando Yakajeka uye Amber Glass Diffuser Bhodhoro fekitera nevatengesi | Hoyer
250ml Yepamusoro Yakajeka uye Amber Glass Diffuser Bhodhoro
Ne yedu yekunhuhwirira diffuser set, iwe unogona kuwana kutsvaira uye kupora, kunyanya inogona kudzikamisa kushushikana kwebasa kwemazuva ese.
Iyi sarudzo yakanaka yekugamuchira munhu wese, zvakanyanyisa pawakashanya. Vanozonakidzwa nemamiriro ekudzikisira uye ekuzorora.
Vhoriyamu: 250ml / 8.3 oz
Hurefu: 130mm / 5.1 inch
Dhaireji: 66mm / 2.6 inch
Ruvara: yakajeka uye amber, kupenda kune imwe ruvara zvakare inogamuchirwa
MOQ: 10,000pcs, hushoma huwandu hunogamuchirwawo kana isu tine stock
Iko kune gumi nemaviri emabhodhoro emuno peji, iwe unogona kusarudza chero munhu waunoda, kana iwe uchida rumwe kutungamira, tapota taura nesu wakasununguka. Semhinduro yakanakisa, tsanga diffuser inogona kuchengetedza nzvimbo dzako dzakaraswa newaunofarira unonhuhwirira mafuta, izvo zvinogona kudzikisa kushushikana zvakanyanya.
Isa imwe tsanga mumafuta ebhodhoro, inogona kuendesa kwakasununguka kubuda kwekunhuhwirira kumhepo. Nakidzwa mumba mako chero nguva.
Kuenderera mberi volatilization: tsanga tsvimbo ndiyo nzira yakanyanya kunaka yekukora mafuta anokosha uye kuparadzira zvinonhuwira mumhepo. Girazi re amber rinogona Rattan zvakanaka kutora mafuta akakosha uye kuparadzira iwo hwema kupinda mumhepo. Iyo yakasviba amber bhodhoro inogonawo kuchengetedza yakakosha maoyiri kure ne Ultraviolet rays uye inogona kushandisa kwenguva yakareba.
Kutenga njodzi-yemahara: Chero zvipi nyaya ndapota iva nechokwadi chekutibata nesu, tichaita zvese zvinogoneka kuti tigadzirise kukanganisa.
Saizi Vhoriyamu: 250ml Kureba 13cmdiam 6.6cm yakajeka uye amber color.
Vhoriyumu: 125ml Kureba 10.2cm
Vhoriyamu: 150ml Kureba 9cm
Dhairemu: 6cm mativi emamita
Vhoriyamu: 8.3 oz urefu: 5.1 inchesDiameter: 2.6 inch(Iri bhodhoro riine rakakura uye rakamanikana mutsipa, mune yakajeka uye amber color)
Vhoriyamu: 4.1 oz Height 4.1 inch
(Iri bhodhoro riine rakakura uye rakamanikana mutsipa, mune yakajeka uye amber color)
Vhoriyamu: 5 oz Height 3.5 inch
Ruvara Kujeka uye amber kudhinda kana kurongedza ruvara zvakare inogamuchirika
MOQ 10,000pcs Huwandu hushoma hunogamuchirwawo kana tine stock
Yepfuura: Yakakurumbira 100ml yakajeka Square Girazi Diffuser Bottle ine Screw Neck
Inotevera: 200ml Hot Kutengesa Round Shape Zvakajeka Girazi Diffuser Bhodhoro
200ml Hot Kutengesa Round Shape Zvakajeka Girazi Diffuser ...
Yakasarudzika Nhema Fibheri Reed Stick yeDiffuser ...
Yakakosha 240ml Yakajeka Girazi Diffuser Bhodhoro ne ...
Akakurumbira Round Rakanaka Girazi Diffuser Bhodhoro
Yakakurumbira 100ml yakajeka Girazi Girazi Diffuser Bottl ...